तीजका गीत : बीचबीचमा नाच्नेदेखि ‘पिसाब लाग्यो’ सम्म ! - Purbeli News
तीजका गीत : बीचबीचमा नाच्नेदेखि ‘पिसाब लाग्यो’ सम्म !
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भाद्र १३, २०७६ समय: १४:१६:४५
काठमाडौं / महिलाको विशेष चाड तीजले झपक्कै छोपिसक्यो । तीजलाई लक्षित गरेर विगतका वर्षहरुमा जस्तै धेरैखाले गीतहरु सार्वजनिक भएका छन् । यस वर्ष रिलिज भएका तीजका गीतमा पिसाबदेखि निसाफसम्म विषयवस्तुहरु समेटिएका छन् ।
यस वर्ष भाइरल भएको तीज गीत हो, ‘हामी पनि नाच्नुपर्छ बीच-बीचमा’ ।